हाम्रो समय र सामान्य मा यहूदी पहिचान मा - रब्बी माइकल अब्राहम
हाम्रो समयमा र सामान्य रूपमा यहूदी पहिचानमा
अकादमिक - 2014
"अचानक एक जना मानिस बिहान उठ्छ र आफु मान्छे भएको महसुस गर्छ र हिड्न थाल्छ"
यदि त्यहाँ किबुत्जिमहरू छन् जुन योम किप्पुर के हो थाहा छैन, शब्बत के हो थाहा छैन र आशा के हो थाहा छैन। खरायो र सुँगुर प्रजनन गरिन्छ। के तिनीहरूको आफ्नो बुबासँग सम्बन्ध छ?… एरे? एरे पवित्र चीज हो? तिनीहरूले आफूलाई हाम्रो सबै विगतबाट अलग गरेका छन् र नयाँ टोराको लागि सोधिरहेका छन्। यदि त्यहाँ कुनै शब्बत र योम किप्पुर छैन भने, त्यो के मा यहूदी हो?
(रब्बी शाचको खरगोशको भाषण, याद एलियाहु, 1990)
यो लेख त्यो दिनमा लेखिएको थियो जब हामी र प्यालेस्टिनीहरू बीच थप वार्ताहरू विस्फोट भइरहेका छन्, तर यस पटक पहिचानका प्रश्नहरू सतहको धेरै नजिक छन्। इजरायलका लागि विस्फोटको मुख्य कारण इजरायल राज्यलाई यहूदी राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने माग थियो। यो माग, अन्य चीजहरूको बीचमा, प्यालेस्टिनी र अन्य तत्वहरूको तर्कद्वारा पूरा हुन्छ, जसले हामीले अरूको माग गर्नु अघि हाम्रो नजरमा के र को हो भनेर परिभाषित गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा, कसै-कसैले हामीलाई खजारहरूको वंशजको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, जसले गर्दा यहूदी कथाको ऐतिहासिक प्रामाणिकतालाई कमजोर पार्छ, जुन हामी वास्तवमा इजरायलको भूमिमा यहाँ बस्ने पुरातन यहूदीहरूको प्राकृतिक निरन्तरता हौं। अर्कोतर्फ, प्यालेस्टिनीहरूले पनि आफ्नो तर्कको आधारको रूपमा ऐतिहासिक (केही हदसम्म भ्रमपूर्ण) राष्ट्रिय पहिचान प्रस्तुत गर्छन्। मैले एल्डाड बेकको लेखमा विशेष गरी रमाइलो उदाहरण फेला पारेको छु, जसले इजरायली सरकारको तर्फबाट प्यालेस्टिनीहरूसँग वार्ताको जिम्मा लिने मन्त्री टजिपी लिभनी र प्यालेस्टिनी पक्षमा वार्ताको जिम्मा लिने साइब एरेकाट बीचको कुराकानीलाई वर्णन गर्दछ। :
म्युनिखमा सुरक्षा सम्मेलनमा ठूलो इजरायली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू हिजो राती छक्क परेका थिए, जब प्यालेस्टिनी वार्ता टोलीका सदस्य साएब एरेकाटले लिभनीलाई थप्पड हाने कि उनी र उनको परिवार कनानी थिए र जेरिकोमा 3,000 वर्ष (!?) पहिले बसेका थिए। जोशुआ बेन नुनको नेतृत्वमा इजरायलको सहरमा आइपुगे। मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियाको बारेमा छलफलको क्रममा जसमा दुई जना सहभागी थिए, इरेकाटले इजरायली र प्यालेस्टिनी दुवै पक्षका विभिन्न ऐतिहासिक कथाहरूको बारेमा कुरा गर्न थाले र प्यालेस्टिनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू वास्तवमा कनानीहरूका सन्तान हुन् भनी तर्क गरे। प्यालेस्टिनी भूमिमा यहूदीहरू भन्दा बढी अधिकार। लिभनीले जवाफ दिनुभयो कि इजरायल र प्यालेस्टिनीहरूले कुन कथा बढी न्यायपूर्ण छ भनेर सोध्नु हुँदैन, तर भविष्य कसरी निर्माण गर्ने भनेर। "म शान्ति व्यवस्थालाई रोमान्टिक रूपमा हेर्दिन। मूर्खता भोलीपन भन्दा कम खतरनाक छैन। "इजरायल शान्ति चाहन्छ किनभने यो उसको हितमा छ।"
व्यावहारिक तर्कभन्दा बाहिर, त्यहाँ एक अर्थ छ कि लिभनीले यो लाजमर्दो छलफलबाट बच्न प्रयास गरिरहेकी छ किनभने उनी सोच्दछन् कि राष्ट्रिय पहिचान अनिवार्य रूपमा एक प्रकारको कथा हो, र त्यसैले यसको बारेमा छलफल अप्रासंगिक छ। यहाँ कुनै पनि सही वा गलत छैन, किनकि आजको प्रचलन अनुसार कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो पहिचान बनाउँछ र यसको लागि अरू कसैलाई अनुमति छैन। धेरैले भन्नेछन् कि यहूदी पहिचानमा पनि विभिन्न कथाहरूले भरिएका प्वालहरू छन् (यद्यपि खुराक प्यालेस्टिनी उदाहरणबाट धेरै फरक छ)। गोल्डा, बेन-सियोन नेतान्याहु र अन्य धेरैको दावी, प्यालेस्टिनी जस्तो कुनै चीज छैन, आज धेरै पुरानो र पुरातन सुनिन्छ। कुनै ऐतिहासिक निष्कर्षहरूको कारण होइन, तर मानिसहरू र राष्ट्रियता अवधारणाहरू हुन् जुन केवल वास्तविक रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
पहिचान, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक प्रश्नहरूले हामीलाई छोड्न अस्वीकार गर्छन्। तिनीहरू अग्लो उभिएर हामीलाई बारम्बार आक्रमण गर्छन्। यस्तो देखिन्छ कि संसारमा लगभग कतै पनि यहूदीहरू र पक्कै पनि इजरायलमा जस्तै अस्तित्वमा रहेका मानिसहरूलाई राष्ट्रिय पहिचानको प्रश्नहरू छन्। तर्कहरू सायद तपाईं प्रामाणिक बेल्जियम हो वा होइन भनेर फेला पार्न सकिन्छ, तर मुख्यतया विरोधीहरूलाई पिट्ने उपकरणको रूपमा, वा राष्ट्रिय-राष्ट्रवादी आन्दोलनको रोमान्सको भागको रूपमा। बेल्जियम, वा लिबिया, वास्तविक र प्रामाणिक हुनुको प्रश्नको साथ अस्तित्वमा संघर्ष गरिरहेको समूह वा व्यक्तिको कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ।
यदि हामीले हाम्रो व्यक्तिगत पहिचानलाई उदाहरणको रूपमा लियौं भने, हामी मध्ये कोही पनि म वास्तविक माइकल अब्राहम हुँ वा म वास्तवमा माइकल अब्राहम हुँ भन्ने कुरामा दुविधा छैन? माइकल अब्राहमको परिभाषा के हो, र के म यसको जवाफ दिन्छु? व्यक्तिगत पहिचान स्वयं स्पष्ट छ र परिभाषा आवश्यक छैन। पारिवारिक पहिचानको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो। अब्राहमिक परिवारसँग सम्बन्धित हरेक व्यक्ति त्यस्तै हो, र त्यो हो। यी सन्दर्भहरूमा मापदण्ड र परिभाषाहरूको बारेमा प्रश्नहरू कोण जस्तो देखिन्छ। धेरै राष्ट्रहरूमा यो राष्ट्रिय पहिचानको सन्दर्भमा पनि हुन्छ भन्ने धारणा मैले पाएको छु। उनी त्यहाँ मात्र छिन्, र यो हो। त्यसोभए यो उनको बारेमा के हो, यहूदी पहिचानमा, जसले हामीलाई अस्तित्वको रूपमा सताइरहन्छ? के यो विषयमा रचनात्मक र बौद्धिक छलफल गर्न सम्भव छ?
यस लेखमा म यहूदी पहिचानको छलफलमा संलग्न पद्धतिगत समस्याहरू वर्णन गर्ने प्रयास गर्नेछु, र अर्कोतर्फ, मुद्दा र यसको अर्थको सामान्य ज्ञान विश्लेषण र प्राथमिकता विश्लेषणात्मक प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसकारण ठूलो तस्विर गुमाउन नपरोस् भनेर म विवरण र सूक्ष्मताहरूमा जानेछैन, र विशिष्ट स्रोतहरू, टोराह वा सामान्य विचारको आवश्यकता बिना नै मलाई व्यावहारिक लाग्ने सामान्यीकरणहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछु। विषयगतताको लागि मेरो आवश्यकता, र विशेष गरी इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको राजनीतिको लागि, यहाँ राजनीतिक उद्देश्यका लागि होइन तर मेरो टिप्पणीमा उठ्ने दावीहरू प्रदर्शन गर्नको लागि गरिएको हो। द्वन्द्व आफैं र कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा म यहाँ कुनै अडान व्यक्त गरिरहेको छैन।
सांस्कृतिक-दार्शनिक छलफल र हलाखिक-तोराह छलफल
छलफलको शीर्षकमा मुख्य अवधारणा, यहूदी पहिचान, अस्पष्ट छ। यसको बारेमा छलफल कम्तिमा दुई दिशामा लिन सकिन्छ: क. दार्शनिक-जातीय-सांस्कृतिक अर्थमा यहूदी राष्ट्रिय पहिचान। बि. टोराह-हलाखिक अर्थमा यहूदी पहिचान (धेरैले यो धारणालाई स्वीकार गर्दैनन् कि यी दुई फरक छलफलहरू हुन्)। यो पक्कै पनि प्रश्नसँग जोडिएको छ (मेरो विचारमा बाँझो) कि यहूदी धर्म एक धर्म हो वा राष्ट्र हो, जुन म यहाँ छुने छैन। यी दुई फरक छलफल मात्र होइनन्, तर तिनीहरूले दुई फरक छलफल विधिहरू अभिव्यक्त गर्छन्: छलफललाई सामान्य वैचारिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने वा हलखिक-तोराह प्रणालीमा।
सामान्यतया, राष्ट्रिय पहिचान भन्दा धार्मिक पहिचान परिभाषित गर्न सजिलो छ। यो किनभने धार्मिक पहिचानहरू साझा मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित हुन्छन्, र विशेष गरी प्रतिबद्ध कार्यहरू र विश्वासहरूमा आधारित हुन्छन् (यद्यपि व्याख्याका विभिन्न रंगहरू छन्। जीवनमा कुनै पनि कुरा वास्तवमा त्यति सरल छैन)। यसको विपरित, राष्ट्रिय पहिचान एक अधिक अनाकार अवधारणा हो, र इतिहास, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, भाषा, निश्चित चरित्र विशेषताहरु र अधिक, वा यी सबै को केहि मिश्रण मा आधारित छ। सामान्यतया राष्ट्रिय पहिचान सामान्य मानसिक वा व्यावहारिक सिद्धान्तहरूसँग सम्बन्धित हुँदैन, र निश्चित रूपमा विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि विशिष्ट सिद्धान्तहरूसँग सम्बन्धित हुँदैन। तर संस्कृति, भाषा, एक वा अर्को प्रकारको मनोवैज्ञानिक विशेषताहरू परिवर्तनशील र अस्पष्ट हुन्छन्, र धेरै जसो अवस्थामा तिनीहरू अन्य राष्ट्रियताहरूसँग साझा गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, यी मध्ये केही विशेषताहरू भिन्न हुन्छन्, र एक व्यक्ति वा कम्पनीले ती मध्ये केहीलाई अपनाउन वा त्याग्न सक्छ। त्यसोभए यी मध्ये कुन राष्ट्रिय पहिचानको लागि आवश्यक मापदण्ड हो?
यहूदी सन्दर्भमा पनि यो कुरा हो। धार्मिक यहूदी पहिचान परिभाषित गर्न यो एकदम सजिलो छ। जो मिट्भोस राख्न बाध्य छन् तिनीहरूको यहूदी पहिचान छ। कति मिट्जभोहरू अवलोकन गर्नुपर्छ? यो एक झन् जटिल प्रश्न हो, र यो हाम्रो जटिल पुस्तामा झन् जटिल हुँदै गइरहेको छ, तर यो दोस्रो-क्रम प्रश्न हो। सिद्धान्तमा mitzvos को प्रतिबद्धता हाम्रो आवश्यकताहरु को लागी एक पर्याप्त परिभाषा हो। यसबाहेक, हलाखिक सन्दर्भमा पहिचानको प्रश्न, धार्मिक पनि, कुनै महत्त्व छैन। त्यहाँ सबै प्रकारका धार्मिक दायित्वहरू, कसलाई सम्बोधन गरिन्छ र तिनीहरू कसलाई बाँध्न्छन् भन्ने सन्दर्भमा एकदम स्पष्ट हलाखिक परिभाषा छ। टोराह-हलाखिक अवधारणाहरूको संसारमा धार्मिक पहिचानको प्रश्नहरू सीधा उठ्दैनन्।
धार्मिक पहिचानको सन्दर्भमा प्रश्नको हलाखीक महत्त्व छैन भने राष्ट्रिय पहिचानको प्रश्नको सन्दर्भमा यो सहज र भौतिक छ । एउटा समूहको यहूदी राष्ट्रिय पहिचान छ भन्ने दृढ संकल्पको हलाखिक नतिजा के हो? हलाखाहमा, मिट्जोस कसले राख्छ वा राख्दैन भन्ने प्रश्नको अर्थ छ, र अझ बढी, कसले राख्नुपर्छ वा राख्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न। पहिचानको प्रश्नको कुनै स्पष्ट हलाखिक जवाफ छैन, र यसको आफ्नै मा प्रत्यक्ष हलाखिक प्रभाव छैन।
हलाखिक दृष्टिकोणबाट, एक यहूदी त्यो हो जो यहूदी आमाबाट जन्मेको वा सही रूपमा परिवर्तन भएको हो। हलाखिक अर्थमा यो उनको पहिचान हो, र उसले के गर्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन, र विशेष गरी उसले मिट्वोस राख्छ वा राख्दैन। Halachically उसले पक्कै पनि तिनीहरूको पालना गर्नुपर्छ, र यो नगर्ने एक अपराधी हो र उसलाई के गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्न सम्भव छ। तर उनको पहिचानको प्रश्नले फरक पार्दैन। "पूरा इजरायलबाट आए" जस्ता वाक्यांशहरू प्रायः रूपक हुन्, र हलाखामा कुनै वास्तविक व्यावहारिक निहितार्थ छैन। र यदि तिनीहरूको केही अर्थ छ भने, हलाखाहले तिनीहरूलाई यसको प्राविधिक मापदण्ड अनुसार परिभाषित गर्दछ।
राष्ट्रिय पहिचान: सम्झौता र आकस्मिकताहरू बीचको भिन्नता
अहिलेसम्म हामीले हलाखिक-धार्मिक दृष्टिकोणबाट पहिचानका प्रश्नहरूको सामना गरेका छौं। सामान्य दार्शनिक दृष्टिकोणबाट, मुख्य चासो राष्ट्रिय पहिचानमा छ, धार्मिकमा होइन। मैले पहिले नै उल्लेख गरिसकेको छु कि सामान्यतया राष्ट्रिय पहिचान एक अस्पष्ट र परिभाषित गर्न गाह्रो अवधारणा हो। यहाँ म राष्ट्रिय पहिचानको परिभाषाको सम्बन्धमा मुख्यतया दुई चरम ध्रुवहरूमा केन्द्रित हुनेछु: सहमतिवादी (परम्परागत) दृष्टिकोण र आवश्यकवादी (आवश्यकतावादी) दृष्टिकोण।
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय पहिचानको प्रश्न नयाँ र अनिवार्य रूपमा आधुनिक प्रश्न हो। टाढाको विगतमा, विभिन्न कारणहरूले गर्दा, मानिसहरूले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान के हो र यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर आफैलाई सोध्न गाह्रो थियो। संसार धेरै स्थिर थियो, मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू गरेनन्, र प्रतिस्पर्धी पहिचानहरूसँग उनीहरूको पहिचानको सामना गर्नुपरेको थिएन। उनीहरुको चेतनामा राष्ट्रिय पहिचानको छुट्टै अवधारणा थियो कि थिएन र त्यो पहिचानमा परिवर्तन भए पनि स्वस्फूर्त र स्वाभाविक र अचेतन रूपमा आएको हो कि भन्ने शंका छ । राष्ट्रिय पहिचान माथि उल्लेखित व्यक्तिगत र पारिवारिक पहिचान जस्तै प्राकृतिक थियो। धार्मिक पृष्ठभूमिले पनि चासोमा योगदान पुर्‍यायो, किनकि अधिकांश मानिसहरूको धार्मिक पहिचान थियो। पहिलेको संसारमा एउटा धारणा थियो कि राजा हुनको लागि जन्मेकाहरूका लागि राजात्व ईश्वरको उपहार हो, र त्यसैसँग हाम्रो राष्ट्रिय र धार्मिक पहिचान र सम्बद्धता छ। यी सबै उत्पत्तिको छ दिनमा संसारको साथ सृष्टि गरिएको थियो, र ग्रान्डेडको लागि लिइएको थियो।
आधुनिक युगमा युरोप र समग्र विश्वमा राष्ट्रवादको उदयसँगै यो प्रश्न पूर्ण रुपमा उठ्न थाल्यो । राष्ट्रिय पहिचान परिभाषित गर्ने कठिनाईले उत्तरहरू पाएको छ जुन प्रायः दुई ध्रुवहरू बीचको हुन्छ: पहिलो भनेको परम्परावादी पोल हो जसले राष्ट्रिय पहिचानलाई लगभग स्वेच्छाचारी सम्झौताको आधारमा हेर्छ। एक पटक एक समूहले आफूलाई जनताको रूपमा हेर्छ, कम्तिमा यदि यो निश्चित समयसम्म रहन्छ भने, किनभने त्यो जनता हो। कवि अमीर गिल्बोवाले 1953 मा, राज्यको स्थापना पछि, यसलाई निम्न रूपमा वर्णन गरे: "अचानक एक व्यक्ति बिहान उठ्छ र आफू जनता हो भन्ने महसुस गर्छ, र हिँड्न थाल्छ।" अर्को ध्रुव भनेको वास्तविक धारणा हो जसले राष्ट्रिय पहिचानलाई व्यक्तिगत पहिचान जस्तै प्राकृतिक र संरचित कुराको रूपमा हेर्छ। जब कसैले त्यो मायावी "प्राकृतिक" तत्व, राष्ट्रियता, रोमान्टिक कहिलेकाहीं मेटाफिजिक्समा आउँछ। यी दृष्टिकोणहरूका अनुसार, राष्ट्रियताको कुनै न कुनै अर्थमा मेटाफिजिकल अस्तित्व छ, प्लेटोनिक विचार जस्तै, र राष्ट्र बनाउने व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूको आधिभौतिक सम्बन्धको कारणले यस संस्थामा समावेश गरिएको छ। प्रत्येक घोडा घोडा के हो भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक बिना घोडाहरूको समूहसँग सम्बन्धित छ। ऊ केवल घोडा हो, र त्यो हो। त्यस्तै गरी, प्रत्येक बेल्जियम कुनै पनि परिभाषामा प्रतिबद्ध नगरी बेल्जियम समूहसँग सम्बन्धित छ। परिभाषाहरू सुझाव दिन गाह्रो भएकोले मात्र होइन, तर यो आवश्यक छैन। व्यक्तिगत र पारिवारिक पहिचान जस्तै राष्ट्रिय पहिचान पनि प्राकृतिक अवधारणा हो ।
यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि राष्ट्रिय जागरणको वर्णन गर्ने अमीर गिल्बोआका शब्दहरू पनि वस्तुनिष्ठ-आधिभौतिक अवधारणाको ढाँचामा लेख्न सक्थ्यो, तर यहाँ यो एक अनुभवात्मक जागरण हुनेछ, जसमा पहिले सुप्त थियो उही आध्यात्मिक वास्तविकताले मानिसहरूको चेतनामा प्रवेश गर्छ। । यो तिनीहरूमा जागृत हुन्छ र तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा, ठोस संस्थागत राजनीतिक र सामाजिक संवेदनाहरूमा यसलाई महसुस गर्न चाहन्छन्। अचानक एक व्यक्ति उठ्छ र आधिभौतिक तथ्य (जुन सँधै सत्य भएको छ) महसुस गर्छ कि ऊ मान्छे हो, र हिँड्न थाल्छ। राष्ट्रिय जागरणको रोमान्समा मानिस कोमाबाट ब्यूँझनुको अर्थमा उठेको हो, जसमा ऊ उत्पन्न भएको सहमतिको अवधारणाको विपरीत पदयात्रा सुरु गर्न जमिनबाट आरोहणको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। स्थापना जागरण हो कि गठन भन्ने बहस चलेको छ ।
राष्ट्रिय पहिचान: सहमतिको दृष्टिकोण र यसको अभिव्यक्ति
नक्साको सहमति पक्षमा बेनेडिक्ट एन्डरसन जस्ता विचारकहरू आफ्नो प्रभावशाली पुस्तकमा खडा छन् काल्पनिक समुदायहरू (1983), र धेरै अरूले अनुसरण गरे। यसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय पहिचान जस्ता अवधारणाहरूको आवश्यक सामग्रीको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दछ। यो दृष्टिकोण राख्नेहरूले राष्ट्रियतालाई एक प्रकारको स्वेच्छाचारी कथाको रूपमा हेर्छन् जुन तिनीहरूको (सामान्यतया साझा) इतिहास भर केही समूहहरूको चेतनामा सिर्जना र क्रिस्टलाइज गरिएको छ। यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यसको अर्थ यो जागरण मान्य छैन, वा यसको माग र दाबीहरूलाई कम आँकलन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। निश्चित रूपमा होइन। राष्ट्रिय पहिचान एक मनोवैज्ञानिक तथ्यको रूपमा अवस्थित छ र मानिसहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, र धेरैले विश्वास गर्छन् कि यो सम्मानको योग्य छ। तर मूलतः यो मनमानी कुरा हो। यस दृष्टिकोणको अर्थलाई तिखार्नको लागि, मैले यहाँ समसामयिक मामिलाहरूमा केही अनुच्छेदहरू समर्पित गरेमा पाठकले मलाई क्षमा गर्नुहुनेछ।
सहमति विद्यालयसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणको एक स्पष्ट उदाहरण प्रो. श्लोमो जान्डको दृष्टिकोण हो। जान्ड तेल अवीव विश्वविद्यालयका इतिहासकार हुन्, जो पहिले कम्पास सर्कलमा थिए र इजरायलको कट्टरपन्थी बायाँ सर्कलहरूसँग सम्बन्धित थिए। उनको विवादास्पद पुस्तकमा यहूदी मानिसहरूको आविष्कार कहिले र कसरी भयो? (कुश्ती, 2008), जान्डले विशेष गरी बेनेडिक्ट एन्डरसनको थीसिसलाई चुनौती दिने उदाहरणको विश्लेषण गर्न रोजे। उसले त्यहाँ यहूदीहरू काल्पनिक समुदाय हुन् भनी प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ। यो कार्य विशेष गरी महत्वाकांक्षी छ, एन्डरसनको स्थितिको बारेमा हाम्रो विचार जे भए पनि, यदि त्यहाँ (पश्चिमी) संसारमा कुनै उदाहरण छ जुन उसको थीसिसको विपरीत खडा छ भने त्यो यहूदी मानिसहरू हो। वास्तवमा, मेरो विचारमा (र धेरै अन्यको विचारमा) जान्डको पुस्तकले ऐतिहासिक अनुसन्धानलाई नराम्रो नाम दिन्छ, र विशेष गरी विचारधारा र अकादमिक अनुसन्धान बीचको यस्तो आधारभूत र महत्त्वपूर्ण भिन्नतालाई कमजोर बनाउँछ। तर के उसलाई यो सबै गर्न अनुमति दिन्छ राष्ट्रिय पहिचान को अवधारणा को अंतर्निहित अस्पष्टता हो।
यदि हामीले वर्तमान घटनाहरूलाई जारी राख्यौं भने, अर्को ध्रुवबाट विशेष रूपमा स्पष्ट उदाहरण, एन्डरसनको दृष्टिकोणलाई राम्रोसँग पुष्टि गर्ने एउटा प्यालेस्टिनी जनता हो। प्यालेस्टिनीहरू एक काल्पनिक पहिचानमा आधारित व्यक्तिहरू हुन् (जसमा कहिलेकाहीँ वास्तवमै काल्पनिक भ्रमहरू समावेश हुन्छन्, जस्तै फिलिस्टिन वा बाइबलीय क्यानानीहरू, वा पहिलेका युगहरूमा पनि)।, ऐतिहासिक सर्तहरूमा लगभग केहि पनि बाहिर सिर्जना गरियो।
यहाँ सहमतिको अवधारणाको एक विशिष्ट निहितार्थलाई औंल्याउन यो अर्थपूर्ण छ। आफ्नो पुस्तकको सुरुमा, जान्डले पुस्तक समर्पण गर्दछ: "अल-शेख मुआनिसका बासिन्दाहरूको सम्झनामा जुन टाढाको अतीतमा विस्थापित भएका थिए जहाँ म बस्छु र नजिकको वर्तमानमा काम गर्दछु।" स्वर वर्णनात्मक र निर्मल छ, र यसको अनुहारमा उसले यसलाई समस्याको रूपमा नदेखे जस्तो देखिन्छ। यदि राष्ट्रिय पहिचान जन्मजात काल्पनिक हो भने एउटा काल्पनिक पहिचानले अर्कोलाई धकेलिरहेको हुन्छ । आउँछ र हराउँछ। यो संसारको रीत हो। उहाँका अनुसार यी मनोवैज्ञानिक तथ्यहरू हुन् र आधिभौतिक मूल्य वा सत्य होइनन्, ऐतिहासिक सत्य पनि होइनन् । यो परम्परावादी मुद्राको अर्को पक्ष हो जसले राष्ट्रिय पहिचानलाई काल्पनिक रूपमा देख्छ।
निष्कर्ष यो हो कि यदि राष्ट्रिय पहिचान वास्तवमा एक स्वेच्छाचारी व्यक्तिपरक सम्झौता हो भने, यसबाट दुईवटा उल्टो निष्कर्ष निकाल्न सम्भव छ (यद्यपि आवश्यक छैन): 1. त्यस्ता संस्थाहरूको वास्तविक अधिकार हुँदैन। राष्ट्रहरू मेरुदण्डविहीन प्राणी हुन्, जसको मानिसहरूको कल्पनाभन्दा बाहिर कुनै अस्तित्व हुँदैन। 2. राष्ट्रिय पहिचान धेरै व्यक्तिहरूको पहिचानको अभिन्न अंग हो र वास्तवमा त्यहाँ कुनै अन्य राष्ट्रिय पहिचान (अनिवार्य रूपमा वास्तविक) छैन, त्यसैले यो एक काल्पनिक पहिचान हो भन्ने तथ्यको मतलब त्यस्ता संस्थाहरूको दाबी र दाबीहरू हुन सक्छन् भन्ने होइन। कम अनुमान गरिएको।
चमत्कारपूर्ण रूपमा, यो दृष्टिकोण भएका धेरै मानिसहरूले आफूलाई एउटा पहिचानको आलोचना गर्न प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ (जान्ड, इजरायली-यहूदी) र उनीहरूलाई स्वेच्छाचारी र काल्पनिक सामाजिक सम्मेलनलाई रहस्यमय बनाउने, आफूलाई जान्नको लागि आविष्कार गरेको आरोप लगाउँछन्। उही समय उही दृष्टिकोणबाट। अर्को काल्पनिक पहिचानको (प्यालेस्टिनी, जान्डको उदाहरणमा)। विशेष गरी यहूदी जनता सबैभन्दा कम सफल उदाहरण हुन् र प्यालेस्टिनी जनता काल्पनिक राष्ट्रवादको स्पष्ट उदाहरण हुन् भन्ने तथ्यले यो बेतुकापनलाई अझ बढाएको छ। म दोहोर्‍याएर जोड दिन्छु कि म यहाँ राजनीतिक मान्यताको लागि त्यस्तो समुदायको दावीसँग उचित सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्न चाहन्न, किनकि यो एक मानक-मूल्य-राजनीतिक प्रश्न हो। यहाँ मैले ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विवरण र छलफलमा असहजताको आलोचना मात्र गरेको छु।
राष्ट्रिय पहिचान: आवश्यक दृष्टिकोण
अहिलेसम्म म परम्परागतता र यसको समस्याग्रस्त प्रकृतिको पक्षमा उभिएको छु। सायद यी कठिनाइहरूको कारणले गर्दा, कोहीले राष्ट्रिय पहिचानको अवधारणालाई मेटाफिजिक्सको दायरामा लैजान्छन्। युरोपमा राष्ट्रिय जागरण, साथै यहूदी राष्ट्रिय जागरण जुन जियोनिस्ट आन्दोलनमा झल्किएको थियो र युरोपेली राष्ट्रिय रोमान्टिकवादबाट धेरै प्रभावित भएको थियो। यी आन्दोलनहरूले प्रायः राष्ट्रियता कुनै न कुनै भौतिक तत्व (जनता, राष्ट्र) मा स्थापित भएको स्थिति व्यक्त गर्छन्। यस दृष्टिकोणको चरम अभिव्यक्तिहरू फासिस्ट अभिव्यक्तिहरूमा देखा पर्दछ (हिटलरको जर्मनीमा, बिस्मार्क र उनीहरूभन्दा पहिले, साथै गारिबाल्डीको इटाली र थपमा)। यी मनोवृत्ति रब्बी कुक र उनका विद्यार्थीहरूको टोरा विचारमा व्यक्त गरिएको थियो। यिनीहरूले यो मेटाफिजिकल विचारलाई अपनाए, र यसलाई यहूदी विश्वासको सारमा परिणत गरे। यहूदी स्पार्क, मन्द, लुकेको, अस्वीकार र दमन, यद्यपि यो हुन सक्छ, एक व्यक्तिको यहूदी धर्म परिभाषित गर्दछ। इजरायलको सद्गुण र प्रत्येक यहूदीको जन्मजात र आनुवंशिक विशिष्टता, यहूदी धर्मको लागि लगभग एक विशेष मापदण्ड बनेको छ, विशेष गरी जब सबै परम्परागत विशेषताहरू (पालन) गायब भयो, वा कम्तिमा पनि एक सहमतिमा सामान्य भाजक हुन बन्द भयो। "इजरायलको नेसेट" रूपकबाट यहूदी मेटाफिजिकल विचारको ओन्टोलजिकल अभिव्यक्तिमा परिणत भएको छ।
म यहाँ सहमतिको प्रतिक्रियामा वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछु, तर ऐतिहासिक अक्षमा यो स्पष्ट छ कि वास्तविक (यद्यपि सँधै मेटाफिजिकल होइन) अवधारणा परम्परागतवादको अगाडि थियो। ऐतिहासिक रूपमा, यो परम्परागत दृष्टिकोण हो जुन वास्तविक दृष्टिकोणको प्रतिक्रियामा देखा परेको छ। यदि मौलिक दृष्टिकोणलाई आधुनिकता र राष्ट्रिय जागरणसँग धेरै नै पहिचान गरिएको छ भने, परम्परावाद पोस्ट-राष्ट्रिय "नयाँ आलोचना" को भाग हो जुन उत्तरआधुनिकता भनेर चिनिने स्थितिसँग चिनिन्छ।
अहिले सम्म मैले एकअर्काको विपरीत दुई धारणाहरू वर्णन गरेको छु। तिनीहरू कहाँ टक्कर गर्छन्? तिनीहरू बीच के भिन्नताहरू छन्? मलाई लाग्छ कि यस स्तरमा हामी एक आश्चर्यको लागि छौं। दोस्रो दृष्टिकोण भएका प्राथमिकताहरू, आवश्यकहरू, राष्ट्रिय पहिचानको परिभाषा खोज्नबाट मुक्त छन्। आखिर, तिनीहरूका अनुसार, जो कोही पनि मेटाफिजिकल विचार (इजरायलको नेसेट) को लागी एक यहूदी हो। रूपान्तरणको विवादमा पनि हामीले रूपान्तरण प्रक्रियाको सहजीकरणको माग गर्ने आधारको रूपमा "इजरायलको बीउ" को तर्कको बारेमा बारम्बार सुन्छौं, र अचम्मको कुरा होइन यो मुख्यतया रब्बी कुकको नजिकका सर्कलहरूबाट आउँछ। यो मेटाफिजिक्स हो जसले हामीलाई यहूदीहरूको रूपमा परिभाषित गर्दछ, र त्यसैले हामी कार्यक्रम परिभाषाहरूको आवश्यकताबाट मुक्त छौं। मेटाफिजिकल रोमान्टिक्सको लागि, यहूदी पहिचान एक अनुभवजन्य तथ्य हो जुन सामग्री, मान, वा कुनै अन्य मापदण्डको अधीनमा छैन। निस्सन्देह, यस्तो मनोवृत्ति भएकाहरूले विश्वास गर्न सक्छन् कि प्रत्येक यहूदीले टोराका मानहरू र मिट्वोसहरू पालन गर्नुपर्छ, तर यो एक यहूदी र उसको पहिचानको रूपमा उसको परिभाषासँग कुनै सरोकार छैन।
निस्सन्देह, भौतिकवादी-आधिभौतिक धारणाहरू अनुसार पनि, यहूदी राष्ट्रिय पहिचानका विभिन्न विशेषताहरू प्रस्ताव गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूको विचारमा यी आकस्मिक विशेषताहरू हुन्, अर्थात्, तिनीहरू राष्ट्र परिभाषित गर्ने उद्देश्यका लागि महत्त्वपूर्ण छैनन्। तिनीहरूलाई नहेर्नेहरू पनि यहूदी धर्मशास्त्रीय विचारका कारण यहूदी हुन्। यो जति अप्रत्याशित छ, पहिचानको प्रश्न परम्परागत सोचको लागि विदेशी छ।
अर्कोतर्फ, परम्परावादी दृष्टिकोण भएकाहरू, जो मेटाफिजिकल रोमान्समा विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूलाई यो राष्ट्रिय पहिचान को हो र को छैन भनेर निर्णय गर्न सक्ने धेरै परिभाषा, मापदण्ड र विशेषताहरू चाहिन्छ। त्यसैले तिनीहरू आफैलाई सोध्छन् कि हामी किन यहूदी हौं। मेटाफिजिक्स होइन भने के हो? तर परम्परावादीहरूले त्यस्तो प्रशंसनीय परिभाषा फेला पार्दैनन्, र यसरी काल्पनिक पहिचानको धारणामा पुग्छन्। तिनीहरूमध्ये धेरैले यस्तो परिभाषा अपनाए जुन यहूदी पहिचानको प्राकृतिक निरन्तरता जस्तो देखिदैन जुन हामी भन्दा पहिले हजारौं वर्षहरूमा बुझिएको थियो। आमोस ओजका पुस्तकहरू पढ्नु, हिब्रू बोल्नु, सेनामा सेवा गर्नु र राज्यलाई उचित कर तिर्नु, प्रलयमा सतावट हुनु, र सायद टोरा स्रोतहरूबाट प्रेरित भएर पनि आज यहूदी पहिचानका विशेषताहरू हुन्। यसमा साझा इतिहास र वंशावली जोड्नुपर्छ। यो तथ्यपरक छ र हाम्रो समयमा यहूदीहरूलाई वास्तवमा विशेषताहरू मात्र यही हो (यद्यपि ती सबै निश्चित रूपमा होइन)। यदि त्यसो हो भने, तिनीहरूको दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय पहिचान पनि एक प्रकारको तथ्य हो, जस्तै मेटाफिजिकल विधिमा, यो बाहेक यहाँ यो एक मनोवैज्ञानिक-ऐतिहासिक तथ्य हो, कुनै आध्यात्मिक तथ्य होइन।
परम्परावादी दृष्टिकोणको सम्बन्धमा दुईवटा प्रश्न उठ्छन्:
कुन अर्थमा यो राष्ट्रिय पहिचानले यसका विगतका अभिव्यक्तिहरूको निरन्तरता हो? यदि काल्पनिक पहिचान मात्र निरन्तरताको आधार हो भने, यो पर्याप्त छैन। हामीले पहिले समूह परिभाषित गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र हामी यसको विशेषताहरू के हो भनेर सोध्न सक्छौं। तर जबसम्म विशेषताहरू अवस्थित छैनन् हामी कसरी समूह परिभाषित गर्ने? यो एउटा चित्तबुझ्दो समाधानविना रहिरहने प्रश्न हो र सहमतिको चित्रमा यसको सन्तोषजनक समाधान हुन सक्दैन। भनिएझैं, अत्यावश्यक पदका धारकहरूसँग पनि यस प्रश्नको कुनै समाधान छैन, बाहेक उनीहरू यसबाट चिन्तित छैनन्।
के यी परिभाषाहरूले साँच्चै "काम गर्छ"? आखिर, यी परिभाषाहरू वास्तवमा कुनै पनि महत्वपूर्ण परीक्षणमा खडा हुँदैनन्। माथि सुझाव गरिएका सेटिङहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। हिब्रू भाषामा बोल्दा पक्कै पनि यहूदीहरूलाई फरक पार्दैन, र अर्कोतर्फ त्यहाँ धेरै यहूदीहरू छन् जो हिब्रू बोल्दैनन्। बाइबलसँगको सम्बन्ध पनि त्यस्तो छैन (क्रिश्चियन धर्म यसमा धेरै गहिरो रूपमा जोडिएको छ, र धेरै यहूदीहरू यसमा जोडिएका छैनन्)। कर र सैन्य सेवाको भुक्तानीले निश्चित रूपमा यहूदीहरूलाई चित्रण गर्दैन (द्रुज, अरब, आप्रवासी कामदारहरू र अन्य गैर-यहूदी नागरिकहरूले यो कम राम्रोसँग गर्छन्)। यसको विपरित, त्यहाँ धेरै राम्रा यहूदीहरू छन् जो गर्दैनन्, र कसैलाई तिनीहरूको यहूदी धर्ममा शंका छैन। आमोस ओज र बाइबल मूल भाषामा नभए पनि संसारभर पढिन्छ। अर्कोतर्फ, के पोल्याण्डमा लेखिएका साहित्यहरू बाइबलसँग सम्बन्धित छन्‌? त्यसोभए के बाँकी छ?
यहाँ यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँ निश्चित रूपमा यहूदी चरित्र लक्षणहरू छन्, जस्तै धेरै अन्य मानिसहरूको सामूहिक चरित्रको बारेमा भन्न सकिन्छ। तर चरित्र विशेषताहरू राष्ट्रिय रूपमा समान छैनन्। यसबाहेक, एक चरित्र विशेषता को बारे मा कुरा गर्न को लागी एक पहिले यो संग सम्पन्न भएको समूह को परिभाषित गर्नुपर्छ। आखिर, संसारमा त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो एक यहूदी चरित्रको परिभाषा अन्तर्गत पर्न सक्ने चरित्रको साथ सम्पन्न छन्, र अझै पनि कसैले पनि उनीहरूलाई यहूदीहरू भन्न सक्दैनन्। यहूदी को हो भनेर हामीले थाहा पाएपछि मात्र, हामी यहूदीहरूको समूहलाई हेर्न सक्छौं र तिनीहरूको चरित्रलाई चित्रण गर्ने कुनै चरित्र लक्षणहरू छन् कि भनेर सोध्न सक्छौं। त्यहाँ यहूदी इतिहास र एक साझा उत्पत्ति पनि छ, तर यी तथ्यहरू मात्र हुन्। यी सबैमा मूल्य देख्न गाह्रो छ, र यो स्पष्ट छैन किन यी सबैलाई एक अस्तित्व समस्याको रूपमा र परिभाषा चाहिने चीजको रूपमा लिइन्छ। यो वास्तविक रूपमा सत्य हो कि अधिकांश यहूदीहरूको कुनै न कुनै अर्थमा साझा उत्पत्ति र इतिहास छ। कै त? के त्यहाँ वंशावली र इतिहासको अर्थमा कसैलाई यहूदी भएको दाबी गर्ने ठाउँ छ? यदि उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्छ, र यदि होइन भने होइन।
यदि त्यसो हो भने, हामी धेरै खुल्ला र लचिलो भए पनि, सहमतिको दृष्टिकोणमा मूल्यवान अर्थमा राष्ट्रिय यहूदी को हो भनेर तीखो मापदण्डमा औंला उठाउन अझै गाह्रो छ। सायद हामीले मनोवैज्ञानिक (र कहिलेकाहीँ चिकित्सा) निदानमा स्वीकार गरिएको विधि अपनाउनुपर्छ, जस अनुसार दिइएको सूचीबाट निश्चित मात्रामा विशेषताहरूको अस्तित्वले यहूदी पहिचानको सन्तोषजनक परिभाषा गठन गर्नेछ? मैले माथि देखाएको जस्तै, यसलाई सन्तोषजनक मापदण्डको रूपमा हेर्न गाह्रो छ। हामी मध्ये कसैले यस्तो सूची दिन सक्छ? के हामी मध्ये कसैले सात वा पाँचको सट्टा यस विशेषताहरूको सूचीमध्ये छवटा किन आवश्यक छ भनेर व्याख्या गर्न सक्छ? र सबै भन्दा माथि, के यो मापदण्ड यहूदी र गैर-यहूदीहरू बीच एक विश्वसनीय तरिकामा भेद गर्न सफल हुनेछ? एकदम स्पष्ट छैन (माथि उदाहरणहरू हेर्नुहोस्)।
यस समस्याग्रस्त प्रकृतिको कारणले गर्दा, धेरै परम्परावादीहरू यहाँ हलाखिक आनुवंशिकीहरूको क्षेत्रमा फर्कन्छन्, जसको अर्थ तिनीहरू पनि आमामा यहूदी पहिचान खोजिरहेका छन्। अरूले यसलाई व्यक्तिको व्यक्तिगत चेतनामा झुण्ड्याउनेछन्: एक यहूदी त्यो हो जसले आफूलाई यहूदी महसुस गर्छ र घोषणा गर्छ। यस परिभाषाको अन्तर्निहित गोलाकार र खालीपनले वास्तवमा परम्परावादीहरूलाई चिन्ता गर्दैन। सम्झौताहरू कुनै पनि अधिवेशन स्वीकार गर्न तयार छन्, चाहे त्यो सर्कुलर होस् वा अर्थहीन होस्। यसको वैधता उनीहरूले यसमा सहमति जनाएका कारणले हो। तर यो आशा गरिन्छ कि एक काल्पनिक समुदायले आफ्नो पहिचान काल्पनिक मापदण्डमा आधारित गर्न इच्छुक हुनेछ। यी सबै तर्कहरू बाहेक, यो अझै पनि तथ्य वा खाली तर्कहरू हो, जसले निश्चित रूपमा यस मुद्दाको वरिपरि अवस्थित तनावको व्याख्या गर्दैन।
रब्बी शचले माथि उद्धृत गरेको आफ्नो भाषणमा यहूदी पहिचानको परिभाषालाई आक्रमण गर्दछ, र हलाखिक सर्तहरूमा त्यसो गर्दछ। यसले मूलतया एक प्रकारको वास्तविक स्थिति प्रस्तुत गर्दछ, तर आवश्यक छैन कि मेटाफिजिकल (केही मूल्यहरूप्रति प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पहिचान)। Wikipedia 'Speech of the Rabbits and the Pigs' ले रब्बी शाचको खरायोको भाषणमा लुबाविचको रेब्बीको प्रतिक्रियालाई यसरी वर्णन गर्दछ:
लुबाविचर रेबे', बार प्लुगाटा धेरै वर्षको लागि रब्बी शचको, आफ्नै भाषणमा भाषणको जवाफ दिनुभयो, जुन उनले दिएशबाथ पछि उनको बिट मिड्रशमा। यहूदी जनताको विरुद्धमा कसैलाई पनि बोल्न नदिने रेबेले बताए। यहूदीहरूको धारणा हो कि "इजरायल, इजरायलको पाप भएता पनि, इजरायलका सन्तानहरू इजरायलका "एकमात्र छोरा" हुन्। ।। अनि जो आफ्नो निन्दामा बोल्छ, जसरी परमेश्वरको निन्दामा बोल्छ। हरेक यहूदीलाई सबै कुरा कायम राख्न मद्दत गर्नुपर्छ आज्ञाहरू धर्म, तर कुनै पनि हिसाबले आक्रमण गर्दैन। रेबेले आफ्ना समकालीनहरूलाई "आगोले छायादार उदिम" भनेर परिभाषित गरे, र "पक्राउ परेका बच्चाहरू", कि तिनीहरू यहूदी धर्मप्रतिको आफ्नो ज्ञान र मनोवृत्तिको लागि दोषी छैनन्।
यो मेटाफिजिकल प्रकारबाट प्रतिक्रियाको उदाहरण हो। अर्कोतर्फ तत्कालीन राष्ट्रपति हाइम हर्जोगले रब्बी शाचको भनाइप्रति परम्परागत प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै कुबिल्निकका किबुत्ज्निक र राज्य स्थापना गर्ने र सेनामा ठूलो भक्तिपूर्वक सेवा गर्ने हथकडीहरूको यहूदीपन कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरामा आश्चर्य व्यक्त गरे। प्रश्न गरे। त्यसोभए रब्बी साच केको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? उसले मेटाफिजिक्सलाई स्वीकार गर्दैन, न त उहाँ परम्परावादी हुन इच्छुक हुनुहुन्छ। तेस्रो विकल्प छ?
के अपरिभाषित अवधारणाहरू अस्तित्वमा छैनन्?
स्पष्ट निष्कर्ष यो हो कि यहूदी राष्ट्रिय पहिचान को अवधारणा अपरिभाषित छ। निस्सन्देह, फरक परिभाषाहरू प्रस्ताव गर्न सम्भव छ, प्रत्येकले आफ्नो रचनात्मकताको डिग्री अनुसार, तर यो निश्चित रूपमा एक परिभाषामा सहमत हुन सम्भव छैन, र कम्तिमा धेरै समूहहरूको लागि तिनीहरूले आफ्नो परिभाषा पूरा नगर्नेहरूलाई बहिष्कार गरेको देखिँदैन। सबै इजरायल (जबसम्म तिनीहरूको आमा यहूदी हुनुहुन्छ)। के यसको मतलब यो हो कि यस्तो पहिचान अनिवार्य रूपमा काल्पनिक हो, यसको मतलब यहूदी पहिचान वास्तवमा अवस्थित छैन? के मेटाफिजिक्स वा हलाखिक औपचारिकताको लागि एक मात्र विकल्प कथा हो? म निश्चित छुँइन।
यो प्रश्नले हामीलाई दार्शनिक क्षेत्रहरूमा लैजान्छ कि यहाँ प्रवेश गर्ने ठाउँ छैन, त्यसैले म तिनीहरूलाई छोटकरीमा छुने प्रयास गर्नेछु। हामी कला, तर्कसंगतता, विज्ञान, लोकतन्त्र र थप जस्ता धेरै अस्पष्ट शब्दहरू प्रयोग गर्छौं। यद्यपि हामी यस्तो अवधारणालाई परिभाषित गर्न पुग्दा हामीले यहाँ वर्णन गरिएका जस्तै समस्याहरू सामना गर्छौं। धेरैले यसबाट निष्कर्ष निकाल्छन् कि यी अवधारणाहरू काल्पनिक हुन्, र यसको वरिपरि एक भव्य पोस्टमोडर्न दरबार पनि बनाउँछन् (रब्बी शागरसँग वैचारिक सम्बन्ध आकस्मिक होइन)। यसको स्पष्ट उदाहरण गिदोन ओफ्राटको पुस्तक हो, कला को परिभाषा, जसले कलाको अवधारणाको दर्जनौं फरक परिभाषाहरू प्रदान गर्दछ र तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्दछ, जबसम्म ऊ अन्तमा यो निष्कर्षमा पुग्दैन कि कला भनेको संग्रहालयमा प्रदर्शित हुन्छ (!)। अर्कोतर्फ, रोबर्ट एम. पियर्सिग, आफ्नो पंथ पुस्तकमा जेन र मोटरसाइकल मर्मत कला, फिड्रोस नामक वक्तृत्व प्रोफेसरको रूपक यात्राको वर्णन गर्दछ, जो गुणस्तरको अवधारणालाई परिभाषित गर्ने प्रयासमा छन्। कुनै बिन्दुमा उसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ, यो निष्कर्षमा पुग्छ कि ग्रीक दर्शनले हामीलाई भ्रम पैदा गरेको छ कि प्रत्येक अवधारणाको परिभाषा हुनुपर्छ, र परिभाषा बिनाको अवधारणा मात्र अवस्थित छैन (यो कल्पना गरिएको छ)। तर गुणस्तर जस्तो अवधारणा शायद अपरिभाषित छ, र अझै पनि उसले यो निष्कर्षलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्यो कि यो एक अवधारणा हो जसमा कुनै वास्तविक सामग्री छैन। एउटा महाधिवेशन मात्र हो । यो स्पष्ट छ कि त्यहाँ गुणस्तर जडानहरू छन् र त्यहाँ केही छैनन् कि छैन। त्यसै हदसम्म, त्यहाँ कलाका कामहरू छन् र त्यहाँ कमजोर कलात्मक मूल्यका कामहरू छन्। निष्कर्ष यो छ कि गुणस्तर, वा कला जस्ता अवधारणाहरू, यद्यपि परिभाषित गर्न गाह्रो र सम्भवतः असम्भव छ, अझै पनि अवस्थित छ। तिनीहरू आवश्यक रूपमा कल्पना गर्दैनन्।
राष्ट्रिय पहिचानको सन्दर्भमा पनि यस्तै दाबी गर्न सकिने देखिन्छ । मेटाफिजिक्सको आवश्यकता बिना नै राष्ट्रिय पहिचान हुन्छ भन्ने अत्यावश्यक थेसिसलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्छ। राष्ट्रिय पहिचानका विभिन्न विशेषताहरू छन् र यसको परिभाषा दिन गाह्रो छ, र अझै पनि यी आवश्यक रूपमा कल्पना वा सम्मेलनहरू होइनन्, न त ती मेटाफिजिक्स नै हुन्। यो एक अनाकार वास्तविक अवधारणा हुन सक्छ जुन परिभाषित गर्न गाह्रो वा असम्भव छ। मलाई यस्तो देखिन्छ कि समान मौलिक परिभाषाले रब्बी शचको अवधारणालाई निहित गर्दछ (यद्यपि उसले हलाखिक परिभाषा प्रस्ताव गरेको छ, र वैकल्पिक राष्ट्रिय परिभाषाको सम्भावनालाई स्वीकार गर्दैन)। उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ कि यहूदी पहिचानको एक अनिवार्य परिभाषा छ, र त्यसमा आधारित मानिसहरूबाट मागहरू पनि छन्। अर्कोतर्फ, उनी मेटाफिजिक्सलाई सन्तोषजनक विकल्पको रूपमा देख्दैनन्। मेरो लागि, म त्यस्तो सोच्ने बानी छैन। मेटाफिजिक्स बिना म देख्दिनँ कि कसरी एक राष्ट्रिय एकाईको कुरा आन्टोलजिकल अर्थमा गर्न सकिन्छ। तर यो कुरामा मसँग धेरैको असहमति रहेको स्पष्ट छ।
अहिलेसम्म दर्शन। तर अब अर्को प्रश्न आउँछ: किन यो सबै महत्त्वपूर्ण छ? हामीले किन यहूदी पहिचानलाई परिभाषित गर्नुपर्छ वा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ? मेरो जवाफ यो हो कि यो केहि फरक पर्दैन। यस प्रश्नको लागि कुनै प्रभाव छैन, र यो बौद्धिक विश्लेषणको कुरा हो (सामान्यतया बाँझो, र सायद सामग्रीको खाली पनि)। यदि मैले आर्मचेयरको मनोविज्ञानमा पाप गर्न सक्छु भने, यहूदी पहिचानको खोजी भनेको यहूदी धर्म र इतिहासप्रतिको प्रतिबद्धताको भावनालाई व्यवहारमा राख्न इच्छुक नभएको अभिव्यक्ति हो। मानिसहरूले पहिचानको विकल्प खोजिरहेका छन् जुन कुनै समय धार्मिक थियो, ताकि तिनीहरूले पहिचान र धार्मिक प्रतिबद्धताको बहाव पछि यहूदी महसुस गर्न सकून्। यस उद्देश्यका लागि, नयाँ प्रश्नहरू र नयाँ अवधारणाहरू आविष्कार गरिन्छ, र तिनीहरूलाई बुझ्नको लागि पर्याप्त र व्यर्थ प्रयास गरिन्छ।
मेरो विचारमा, यहूदी पहिचानको बौद्धिक छलफल गर्ने कुनै तरिका छैन, र निश्चित रूपमा यसको बारेमा निर्णयहरूमा पुग्नु हुँदैन, जुन वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छैन। महासन्धि हो भने सहमतिको बहस किन ? प्रत्येकले आफूलाई देखा पर्ने सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नेछ। यदि यो मेटाफिजिक्स हो भने, म यो कसरी बहस र बहस गर्न पहुँचयोग्य छ भनेर देख्दिन। र यदि हामीले यहूदी राष्ट्रिय (हलाखिकको विपरित) पहिचानको ठोस अवधारणालाई स्वीकार गर्छौं भने पनि, यो फेरि परिभाषा, बहस गर्न, र निश्चित रूपमा सहमत निर्णयको लागि पहुँचयोग्य छैन। यी सिमेन्टिक प्रस्तावहरू हुन्, जसमध्ये धेरै निराधार छन्, र अरूहरू पूर्ण रूपमा सामग्रीबाट खाली छन्, वा कुनै पनि तर्कसंगतताको परीक्षण खडा गर्दैनन्। यसबाहेक, मैले औंल्याए जस्तै, यी सबैको कुनै व्यावहारिक महत्त्व छैन। यी मानिसहरू आफैंसँगको मनोवैज्ञानिक संघर्षहरू हुन्, र अरू केही होइन।
यो अनावश्यक र महत्वहीन तर्क अहिले मुख्य रूपमा विपक्षीलाई गाली गर्न प्रयोग गरिन्छ। जो कोही जो समाजवादी विचारहरू प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छन् - हामी सबैलाई व्याख्या गर्दछ कि यहूदी धर्म सधैं समाजवादी भएको छ, र जो कोही त्यस्तो छैन त्यो यहूदी होइन। सैन्यवादी विचारहरूमा रुचि राख्ने अरूहरूले यहूदी धर्म र यहूदी पहिचानलाई पनि देखाउँछन्। त्यसैले यो लोकतन्त्र, समानता, पुँजीवाद, स्वतन्त्रता, खुलापन, जबरजस्ती, परोपकार र दया, सामाजिक न्याय र अन्य सबै उच्च मूल्यहरु संग छ। छोटकरीमा, यहूदी धर्म अन्यजातिहरूको लागि ज्योति हो, तर त्यो ज्योतिको प्रकृति मौलिक रूपमा निर्विवाद र अनिर्णयपूर्ण छ। अन्य विवादहरू जस्तो नभई, जुन स्पष्ट पार्ने तरिकाहरू हुन सक्छन् र यसमा केही मूल्य पनि हुन सक्छ, यहूदी पहिचान सम्बन्धी विवाद सैद्धान्तिक रूपमा अनसुलझे र कुनै पनि अर्थमा महत्वहीन छ।
एउटा कुरा एकदम तार्किक रूपमा स्पष्ट छ: मूल्यहरूको यी सूचीहरू मध्ये कुनै पनि (समाजवाद, सैन्यवाद, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, आदि), वा अन्य कुनै पनि मूल्य, को परिभाषामा आवश्यक, आवश्यक वा पर्याप्त तत्व गठन गर्न सक्दैन। यहूदी पहिचान। यी मध्ये कुनै पनि मानहरू वा तिनीहरूको कुनै पनि संयोजनमा विश्वास गर्ने जो कोही पनि सबै विचार र निर्विवादको लागि एक फैंसी जेन्टाइल हुन सक्छ। समाजवादी गैरजिम्मेवार हुन, समानता वा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने, सैन्यवादी हुन वा नगर्न कुनै बाधा छैन। तसर्थ, यी सबै यहूदी पहिचानको लागि सान्दर्भिक मापदण्ड होइनन्, यदि अविश्वसनीय हुन्छ (र नडराउनुहोस्, यो सम्भवतः हुनेछैन) र कसैले यहूदी परम्परा र स्रोतहरूबाट प्रमाणित गर्न सक्षम हुनेछ कि यी मध्ये एक साँच्चैको भाग हो। यो पहिचान को कार्यक्रम।
हाम्रो समयमा यहूदी पहिचान
राष्ट्रिय पहिचानको बहस निरर्थक र बेकार छ भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ । मैले पहिले नै उल्लेख गरिसकेको छु, धार्मिक पहिचानको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै छ। जो कोही यहूदी आमाबाट जन्मेको छ वा राम्रोसँग धर्म परिवर्तन गरेको छ उसले टोराका आज्ञाहरू र ऋषिहरूका वचनहरू पालन गर्नुपर्छ र उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। त्यो हो। मानिसको परिभाषा, उसको पहिचान, र अन्य तरकारीहरू, एक व्यक्तिपरक कुरा हो, र मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, परम्परावादी, वा सायद एक अनाकार (अपरिभाषित) आवश्यक पनि हुन सक्छ। सबै सम्भावनाहरू सही हुन सक्छन्, त्यसैले तिनीहरूमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
यस्तो बहसको नतिजा के हुनसक्छ भनेर विचार गरौं? कि कसैले आफू असल यहूदी भएकोमा सन्तुष्टि महसुस गर्नेछ? राम्रो महसुस गर्नु मनोवैज्ञानिकहरूको लागि कुरा हो। मूल्य अर्थमा पहिचानको बारेमा छलफलहरू बाँझो र खाली अर्थशास्त्र हुन्, र त्यसैले अनावश्यक छन्। यदि एक ठोस निहितार्थ दिइएको छ जसको लागि हामी पहिचान परिभाषित गर्न रुचि राख्छौं, त्यसपछि यो सम्भव छ (सायद) यसको बारेमा प्रासंगिक प्रश्नहरू छलफल गर्न। तर जबसम्म यो एक सामान्य छलफल हो, सबैले आफ्नो यहूदी धर्मलाई आफ्नो इच्छा अनुसार परिभाषित गर्नेछन्। एउटा सहि र अर्को गलत भए पनि, यस्ता अर्थपूर्ण विश्लेषणबाट जीवन निर्वाह गर्ने केही प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ताहरू बाहेक यो प्रश्नले कसैलाई चासो दिनुपर्दैन। अर्कोतर्फ, यो वीर र व्यर्थ प्रयासमा हस्तक्षेप गर्ने म को हुँ? सिसिफस पनि हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानको हिस्सा हो...
 जर्मनीबाट एल्डाड बेक, YNET, 1.2.2014।
 धर्मनिरपेक्षता प्रक्रियाले विद्वान धार्मिक पहिचानका मुद्दाहरू खडा गर्छ (के यसको मतलब प्रोटेस्टेन्ट, मुस्लिम, वा क्याथोलिक, धर्मनिरपेक्ष हो?)
 यदि हामी परिभाषाहरूसँग व्यवहार गर्दैछौं भने, प्रश्नमा मिट्जभोसको प्रकृति र तिनीहरूको पालनाको लागि प्रेरणा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि कानूनले नैतिक आचरण चाहिन्छ भने, यो संसारमा सबैको लागि साझा भएकोले यस आधारमा यहूदी धर्मलाई परिभाषित गर्न सम्भव छैन। Eretz Yisrael को बसोबास जस्तै mitzvot, जो नैतिक प्रकृतिको छैन, धार्मिक यहूदी पहिचान परिभाषित गर्न सक्दैन, किनकि यो तिनीहरूमा पनि अवस्थित छ जसले आफूलाई यहूदी धर्मको भागको रूपमा परिभाषित गर्दैनन्, किनभने धेरै अवस्थामा प्रेरणा। किनभने तिनीहरूको अस्तित्व एकै ठाउँबाट आएको हो।
 यद्यपि रूपान्तरण पनि एक प्रक्रिया हो जुन आफैंमा धेरै अन्य हलाखिक मुद्दाहरू जस्तै विवादास्पद छ, यो हाम्रो आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त छ।
 यसले पुस्तकलाई बीस भाषाहरूमा अनुवाद गर्न र विश्वभर पुरस्कार जित्नबाट रोकेन।
 हेर्नुहोस्, माथि उद्धृत एल्डाड बेकको पत्र उद्धृत गर्दै।
 मेरो सम्झनाको सबैभन्दा राम्रो, तत्कालीन राष्ट्रपति, हाइम हर्जोगले खरगोशको भाषणको जवाफमा, साथै आजसम्मका धेरैले यो "मापदण्ड" उल्लेख गरे। अलिकति तार्किक संवेदनशीलता भएका जो कोही पनि यस मनमोहक घटनामा छक्क पर्छन्। हामी यहूदी अवधारणालाई परिभाषित गर्न चाहन्छौं, र निम्न तरिकाले त्यसो गर्न चाहन्छौं: निम्न ढाँचामा X को सट्टामा राख्न सकिने सबै ए: "X जसले X महसुस गर्यो" र वर्णन सत्य बाहिर आउँछ, यहूदी हो। यस परिभाषा अनुसार, कुनै पनि आत्म-जागरूक प्राणी जसले आफैंमा झूटो बोल्दैन त्यो यहूदी हो (प्लेसमेन्ट समूह जाँच गर्नुहोस्)।
 यो सम्भव छ कि हामीले गिदोन अफ्राटको माथिको निष्कर्षलाई पनि बुझ्नुपर्छ। सायद उनले कला भन्ने चिज छैन भनी भनेका होइनन्, तर यसबारेको बहस अनावश्यक र फलहीन छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन् ।
3 "हाम्रो समय र सामान्य मा यहूदी पहिचान" मा विचार
H. Bayer 22 - 04/2018/21 59:XNUMX बजे
के रब्बीले नोट7लाई फेरि व्याख्या गर्न सक्षम हुनेछन्?
H. Bayer 23 - 04/2018/07 06:XNUMX बजे
जब तपाईंले एक यहूदीलाई आफूलाई यहूदीको रूपमा सोच्ने व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ, तपाईंले केही भन्नुभएन। परिभाषामा प्रयोग गरिएका सर्तहरू पहिले र बिना परिचित हुनुपर्छ। त्यसोभए यदि हामी मान्दछौं कि यहूदी शब्द X हो र परिभाषाले यसलाई स्पष्ट गर्न आवश्यक छ, तब मूलतया तपाईले यस्तो परिभाषामा के भन्नुभयो त्यो हो कि एक यहूदी एक X हो जसले आफूलाई X हो भन्ने सोच्दछ।
19 Tammuz 07 - 2019/10/26 XNUMX:XNUMX बजे
म सहमत छैन। एक सामाग्री पहिचान गर्न को लागी सबै परिभाषित छैन। कबलाहमा दिव्य र चमक आदि दुवैको परिभाषा छ। जबसम्म कसैले अस्पष्ट टोरामा बोल्छ भने त्यो अर्थहीन परिभाषा हो। त्यहाँ निश्चित रूपमा एक परिभाषा छ। तर म अब उसलाई ल्याउने छैन। परिभाषामा के अभाव छ भनेको हो कि त्यहाँ कुनै सिद्धान्त छैन जसले सबैलाई पहिचान गर्न एकजुट गर्दछ। र त्यसैले त्यहाँ सबैको लागि कुनै पनि पहिचान छैन। यहूदी पहिचान को लागी एक nafkamina छ। किनभने म आफूलाई यहूदीको रूपमा देख्छु भन्ने तथ्य र म यहूदीको रूपमा अर्कोको पहिचानमा शंका गर्दैन। यसमा म आफूलाई उहाँसँग जोड्छु र जब म कुनै निश्चित कार्य गर्छु र यसलाई यहूदी कर्मको रूपमा परिभाषित गर्छु, तब म यहूदी भन्छु, उहाँको यहूदी मूल्यमान्यताको अंश यी कार्यहरू गर्नु हो। यो आवश्यक छैन कि सत्य हो किनभने उदाहरण को लागी एक बिरालो विनम्रता को धर्म को लागी नम्रता को लागी व्यवहार गर्दछ तर एक व्यक्ति को कुकुर जस्तै व्यवहार गर्न को लागी र अर्को उद्देश्य प्राप्त गर्न को लागी भुइँ मा खाने को क्षमता छ। यद्यपि उनले रोजेको बाटो प्रकृतिविपरीत छ ।
यदि यहूदीले वास्तवमै आफूलाई नयाँ यहूदीको रूपमा देख्छ र आफूलाई यहूदी पहिचानबाट अलग गर्छ भने।अर्को, उदाहरणका लागि, फिर्ताको कानून प्रयोग गर्दैन। विशेष गरी यदि यो एक यहूदी राज्यको रूपमा राज्य संस्थाहरू बाहिर गरिएको छ। तर जब सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ तब यसलाई सेक्स भनिन्छ र यहूदी कानून अनुसार अप्रत्यक्ष मृत्युको कारण हुनुपर्छ।
त्यसोभए यदि हामी सबैले आफूलाई यहूदीको रूपमा देख्छौं। भिन्नताहरूको बावजुद हामी सबैमा एउटा कुरा समान छ जुन हामीलाई हाम्रो यहूदी परिभाषा त्याग्न नदिने कारण हो। र आफूलाई सम्बद्ध गर्न संसारका सबै यहूदीहरूसँग जोडिएको छ। यो कानुनी परिभाषा होइन किनभने कानूनलाई नचिनेका यहूदीहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्छन्। यो सबै यहूदीहरूले चाहेको जीवन शैलीको परिभाषा हो। यो एक परिभाषा हो जुन एक यहूदीको रूपमा उसको जीवनमा अभिव्यक्ति छ भले पनि यो परिभाषा महसुस गर्न खोज्दा मात्र हो। कुनै पनि अवस्थामा, यो मूल्यको केन्द्र हो। चाहे त्यो महसुस गर्ने प्रयासमा होस् वा जबरजस्ती बेवास्ता गर्ने प्रयासमा। किनभने त्यो पनि एउटा मनोवृत्ति हो । अर्कोतर्फ, एउटा मूल्य जससँग उसको कुनै सम्बन्ध छैन उसले के सोच्दैन भनेर अस्वीकार गर्दैन र द्वन्द्वहरू व्यवस्थापन गर्दैन।
थप 3,091 सदस्यहरू सम्मिलित हुनुहोस्
प्रगतिशीलहरूले गर्भपतनको प्रतिरोधमा नेतृत्व गर्ने मानिन्छ मा के इरान यहाँ छ? प्रगतिशीलता र विवेकशील उदारवादमा (स्तम्भ ४८३)
उनको जनावर मा के इरान यहाँ छ? प्रगतिशीलता र विवेकशील उदारवादमा (स्तम्भ ४८३)
मिची मा के इरान यहाँ छ? प्रगतिशीलता र विवेकशील उदारवादमा (स्तम्भ ४८३)